လူတိုင်းသိသင့်သည့် မျက်စိစောင့်ရှောက်ရေး အခြေခံအချက်များ – Healthy Life Journal
Q. လူတိုင်းသိသင့်တဲ့ မျက်စိစောင့်ရှောက်ရေး အခြေခံအချက်အလက်တွေကို သိပါရစေဆရာ။
A. မျက်စိစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် အခြေခံအချက်အနေနဲ့ စကားလုံးသုံးလုံးကို လူတိုင်းမှတ်မိနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မျက်စိပြဿနာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ နီ၊ ကိုက်၊ မှုန်ဆိုတဲ့ စကားလုံးသုံးလုံး ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိက နီလာတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သာမန်မျက်စိနာတာကနေ ကွယ်တဲ့အထိ အမျိုးမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ သာမန်မျက်စိနာတာကြောင့် နီတာဆိုရင်တော့ မျက်စဉ်းဆေးထည့်လိုက်ရုံနဲ့ ပျောက်သွားနိုင်ပေမယ့် ရေတိမ်ကြောင့် မျက်စိနီတာဆိုရင်တော့ ကွယ်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ မျက်စိထဲမှာ အကျိတ်အဖုကြောင့် နီတာဆိုရင်လည်း ကွယ်စေနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် မျက်စိနီတယ်ဆိုရင် နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနကို သွားရောက်ပြီး ပြသသင့်ပါတယ်။
Q. မျက်စိကိုက်တာကတော ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ ဆရာ။
A. မျက်စိကိုက်တယ်ဆိုရင် လူတော်တော်များများက မျက်စိမှာ ဆလင်ဒါပါဝါရှိလို့ ကိုက်တယ်လို့ မှားယွင်းစွာ ယူဆနေကြတယ်။ အထူးသဖြင့် ကွန်ပျူတာ အသုံးများတဲ့လူငယ်တွေက မျက်စိကိုက်တာများတယ်။ လမ်းလျှောက်တာများလို့ ညောင်းတဲ့အတွက် လမ်းလျှောက်တာ ခဏနားရသလိုပဲ မျက်စိကလည်း ကြွက်သားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည့်တာများတော့ ညောင်းလာတတ်ပါတယ်။ ဒါကို အနားပေးဖို့ လိုလာတယ်ဆိုတာ လူတော်တော်များများက မသိကြလို့ မျက်စိကိုက်ကြတာပါ။ မျက်စိ ကြွက်သားတွေရဲ့ ခံနိုင်ရည်အားဟာ နာရီဝက်ထက် မပိုဘူး။ နာရီဝက်ပြည့်တိုင်း တစ်မိနစ်လောက်တော့ အနည်းဆုံး အနားပေးသင့်ပါတယ်။ မျက်စိကိုမှိတ်ပြီး အနားပေးလိုက်တာဟာ မျက်စိထဲမှာပါတဲ့ ဆဲလ်တွေကို ဘက်ထရီ (Charging) အားသွင်းသလို ပြန်ပြီး အားပြန်ပြည့်သွားစေတယ်။ မျက်စိမှိတ်လိုက်တာဟာ မျက်စိအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အနားယူမှုကို ရစေပါတယ်။ ကွန်ပျူတာသုံးချိန် နာရီဝက်ပြည့်တိုင်း တစ်မိနစ်နားဆိုတဲ့ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း အနားယူမှု (Intermittent Relaxation) ကို နားလည်ပြီး လိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့ မျက်စိကိုက်တဲ့ပြဿနာ တော်တော်ပြေလည်သွားမယ် ထင်ပါတယ်။
“ ကွန်ပျူတာသုံးချိန် နာရီဝက်ပြည့်တိုင်း တစ်မိနစ်နားဆိုတဲ့ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း အနားယူမှု (Intermittent Relaxation) ကိုနားလည်ပြီး လိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့ မျက်စိကိုက်တဲ့ ပြဿနာ တော်တော်ပြေလည်သွားမယ် ထင်ပါတယ်။”
ဒါပေမဲ့ မျက်စိကို အနားမပေးဘဲ တစ်ချိန်လုံး အာရုံစိုက်အလုပ်လုပ်နေလို့ ကိုက်တာရှိသလို ရေတိမ်၊ မျက်စိထဲမှာရှိတဲ့ အကျိတ်အဖုနဲ့ ဦးခေါင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိတ်၊ အဖုတစ်ခုခုကြောင့် မျက်စိကိုက်တာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာကြောင့် မျက်စိကိုက်ရတယ်ဆိုတာသိအောင် အကြောင်းရင်းရှာနိုင်ဖို့ မျက်စိဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်တာပါ။
Q. မျက်စိမှုန်တာမှာကော ဘယ်လိုမှုန်တာမျိုးက စိုးရိမ်ရပါသလဲ ဆရာ။
A. မျက်စိတဖြည်းဖြည်းချင်း မှုန်လာတာမျိုးက သိပ်စိုးရိမ်စရာမရှိပေမယ့် မနေ့က အကောင်းအတိုင်း အားလုံးမြင်နေရပေမယ့် ဒီကနေ့မှာ ဒိုင်းခနဲ မှုန်သွားတာမျိုးကျတော့ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အချိန်ဆိုင်းမနေဘဲ အနီးဆုံး မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ဆီ ချက်ချင်းသွားပြသင့်ပါတယ်။ မျက်မှန်တပ်ရတဲ့သူတွေကလည်း မျက်မှန်ပါဝါလိုရုံအဆင့်ကနေ မျက်မှန်တပ်ပေမယ့်လည်း ဘာမှမမြင်ရတော့လောက်အောင် ဒိုင်းခနဲမှုန်သွားတာမျိုးက စိုးရိမ်ရပါတယ်။ မျက်စိမှုန်လို့ မျက်မှန်တပ်ရတဲ့သူတွေမှာ ပထမ မျက်စိစမ်းပြီး မျက်မှန်တပ်တယ်။ နောက်သုံးလလောက်ကြာတော့ တစ်ခါမျက်မှန်ပြန်စမ်းပြီး ပါဝါတိုးတပ်ရတယ်။ နောက်သုံးလလောက်မှာလည်း အဲဒီလို ပါဝါတိုးတပ်ရပြန်တယ်ဆိုရင် မျက်စိရောဂါ တစ်ခုခုကို သံသယရှိသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ- ဆီးချိုရောဂါရှိလို့လား၊ အတွင်းတိမ်စဖြစ်ချင်လို့လား၊ ရေတိမ်ကြောင့်ပဲလားဆိုတာ သံသယရှိပြီး မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်နဲ့ ပြသစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
Q. မျက်စိကွယ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတွေက ဘာတွေပါလဲ ဆရာ။
A. ဆရာတို့နိုင်ငံမှာ မျက်စိကွယ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေမှာ နံပါတ်တစ်က အတွင်းတိမ်၊ နှစ်က ရေတိမ်၊ သုံးက မျက်ကြည်လွှာမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်ကြည်လွှာရောဂါတွေမှာ အဆိုးဆုံးက ရောဂါပိုးကျရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ ရောဂါပါ။ အထူးသဖြင့် ဆရာတို့နိုင်ငံမှာ လယ်သမား၊ အလုပ်သမား ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။ သူတို့ဟာ အလုပ်ခွင်မှာ ကောက်ရိုးနဲ့ထိုးမိလို့၊ တံမြက်စည်းနဲ့ရိုက်လို့၊ သံဂဟေဆော်ရာကနေ မျက်စိထဲသံတိုသံစ၀င်လို့ မျက်ကြည်လွှာမှာ ရောဂါပိုးဝင်တယ်။ ရောဂါပိုးမ၀င်အောင် မျက်စိကို တစ်ခုခုနဲ့ ထိခိုက်မိတာနဲ့ ချက်ချင်းပဲ မျက်စိကို သန့်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့ အားရပါးရ ဆေးကြောသင့်တယ်။ ရေနဲ့ဆေးကြောလိုက်တာနဲ့ အမှိုက်တွေဟာ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ကင်းစင်သွားရင် မျက်စိမှာ ရောဂါပိုးကျရောက်ဖို့ အခွင့်အလမ်း တော်တော် ကင်းဝေးသွားတတ်ပါတယ်။
ပြီးရင် ပဋိဇီဝမျက်စဉ်းဆေး (Antibiotic Eye Drop) တစ်မျိုးကို ခတ်လိုက်ပါ။ တက်ထရာဆိုက်ကလင်း၊ ကလိုရမ်ဖန်နီကောစတဲ့ မျက်စဉ်းဆေးကို တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်နဲ့ တစ်ပတ်လောက် ခတ်လိုက်ရုံနဲ့ ရောဂါပိုးကျရောက်နိုင်တဲ့နှုန်းက ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ကျဆင်းသွားတယ်ဆိုတာကို လေ့လာမှုတွေအရ သိခဲ့ရပါတယ်။